Maitiro ekuverenga mubhadharo uye uzive kuti zvakanaka | Ehupfumi Zvemari
Maitiro ekuverenga mubhadharo uye uzive kuti zvakanaka
Susana Maria Urbano Mateos | | Basa
Kune vazhinji vashandi pasi rese vane kusava nechokwadi paunenge uchiverenga muhoro wako kunyanya vanhu vanokahadzika kuti kubhadhara kuri kuitwa nenzira kwayo. Kuti uve nechokwadi chekuti ivo vari kunyatso kukubhadhara iwe iyo iyo iyo kambani yaunofanirwa kukupa iwe uye kuwedzera kune iyo iyo yese iyo iyo data iri echokwadi, zvakakosha kuti iwe dzidza kuverenga mubhadharo uye iwe unoziva izvo imwe neimwe yedata inowanikwa mairi inoenderana
Vazhinji vevanhu vanoona yavo yekubhadharisa semari yemari inofanirwa kutorwa mwedzi nemwedzi uye kuti vanofanirwa kuisa muaccount; Zvisinei, payroll inofanira kutaridzika seyese kuverenga yezvinhu zvinofanirwa kubhadhariswa uye ndomaitirwo atinozokudzidzisa iwe kuti uverenge.
1 Chii chaizvo mubhadharo
2 Kutanga dhata yatinowana mubhadharo
3 Mari yemuhoro
4 Mari yemubhadharo inotevera
4.1 Base muhoro
4.2 Mishahara inowedzera
4.3 Nguva yakawedzerwa yemushandi wega wega
4.4 Mibairo murudzi.
5 Asiri-muhoro accruals
5.1 Kuregererwa kana zvekushandisa
5.2 Kubviswa kwemitero yemunhu wega
5.3 Izvo zvikamu izvo SS zvinotigadzira
5.4 Kushaya basa
5.5 Kuwedzeredza kwesimba majeure
6 Yese mvura yekugashirwa
Chii chaizvo mubhadharo
Kubhadhara ndiko kunonzwisiswa segwaro rinosungirwa iro kambani rinofanira kupa mushandi nguva dzese uye mune iro data rekambani nebasa iro rakati mushandi ari kuita rinofanira kuoneka. Imwe dhata yekuwedzera inofanirwa kuverengerwa inguva yebasa iyo munhu anga ari mukambani kana mari yehupfumi ichapihwa mushandi pane chimwe nechimwe chezvinhu zvavanoita mukati mekambani.
Mune ino post, isu tichaenda dzidzisa kuverenga kuverenga muhoro wako zvizere uye zvakare ku verenga kuti huwandu hwacho hunowanikwa sei mwedzi upi pamwedzi waunogamuchira muakaundi yako yebhangi.
Kutanga dhata yatinowana mubhadharo
Chinhu chekutanga chatinowana mubhadharo ndeye data yemaviri mapato, ndiko kuti, kune rumwe rutivi, data rekambani uye kune rimwe divi, data remushandi. Mune data rekambani, zita repamutemo rekambani yakati, iyo domain uye iyo CIF inofanirwa kuoneka. Iyo SS quote kodhi inofanirawo kuoneka.
Kune rimwe divi, yako data ichaonekwa, iyo inofanirwa kusanganisira zita uye ID yemushandi. Uye zvakare, mupiro weSS uye chikamu chehunyanzvi chemunhu anoshanda mukambani chinofanira kuverengerwa. Mhando yechibvumirano chauinacho uye wave nenguva yakareba sei uchishanda mukambani.
Idzi data hadziwanzo dzakasiyana uye dzinoshanda kuzivisa mapato ese ari maviri.
Chimwe chinhu chatinofanira kuchengeta mupfungwa ndechekuti iyo yekubhadhara irivhoisi iyo iyo kambani inotipa isu kuitira kunyora kuti takabhadharwa mwedzi nemwedzi. Se invoice, kune mamwe mapoinzi anofanirwa zvakare kuverengerwa mairi, kunyangwe izvi zvichisiyana kubva pamwedzi kusvika kune mumwe.
Iyo yekutarisa account yemunhu anobhadhara uye iye munhu achazogamuchira iyo muripo zvakare yakajairika kuoneka pakutanga kweiyi mhando yechibvumirano kana chero imwe ruzivo iyo vese vakabvumirana kuti inofanirwa kuoneka pamubhadharo.
Muchikamu chechipiri che payroll tichasangana nemaacrruals. Iyi sarudzo inofanirwa kuoneka nemutemo nguva dzose maakaunzi ndiwo anofanirwa kuverenga semari yatichazowana kubva kukambani sevashandi. Pano panofanira kuverenga muhoro uye asiri-muhoro kuwedzerwa.
Mune ino kesi, mari yemubhadharo iri mari inopihwa mushandi kubhadhara muripo webasa ravo mukambani uye iwo asiri muhoro iwo ari iwo anoreva zvinhu kuzvinhu nemasevhisi.
Izvi zvinhu ndezve izvo zvinobhadharwa mumatikiti echikafu kana chero imwe muripo yakadai sekufambisa.
Mari yemubhadharo inotevera
Mubhadharo wepasi ndechimwe chezvinhu zvatinoziva uye zvatinoona pamusoro pezviwanikwa. Pano mamwe ma payroll anotsanangura huwandu hwacho muma gross euros pagore, semuenzaniso kana tiine huwandu hwakakura hweeuros pagore re12000 euros, iyo mari yatinozogashira pamwedzi i1000 euros.
Nezve zvinowedzerwa zvemubhadharo, izvi zvinokanganisa zvinhu zvakasiyana izvo nyanzvi inogona kupa kukambani, semuenzaniso ruzivo kana mitauro kana kungoita chokwadi chekuva nemitoro yakawanda pamusoro pake.
Izvo zvinowedzera zvakare kuverenga kune vashandi vane hunyanzvi mune chero eapo mapoinzi ekambani. Vanhu ava vanowanzo kuve nekuwedzera mubhadharo wavo we10000 euros pagore uye vanogoverwa mune gumi nemaviri ekubhadhara pamwedzi +2 yekuwedzera kubhadhara.
Nguva yakawedzerwa yemushandi wega wega
Ichi chikamu hachina mari yese yekubhadharira sezvo makambani mazhinji achibhadhara iyi data zvakasiyana pasina izvi kuwedzerwa kumabhadharo avo, asi makambani ane data rawo rese akasimbiswa anowedzera nguva yakawandisa kumabhadharo avo uye izvi zvinoratidzwa muchikamu cheawa. Maawa awa anofanirwa kubhadharwa kunyangwe vari vekuzvidira kana zvekumanikidza mukambani yega yega sekunge kontrakiti yedu isingaoneke neimwe nzira. Kazhinji, imwe neimwe yeawa yekuwedzera inoitwa inofanirwa kubhadharwa pa25 euros.
Ichi chikamu chikamu chemubhadharo wavo asi zvakati omei kutaura kuti imarii yemari inogona kupihwa nemutsa, sezvo zviri zvimwe zvinhu nemasevhisi anogamuchirwa nemunhu. Izvi zvakare zvinoenderana nemushandi anogona kutaura kuti hapana chimwe chaanoda kunze kwemari yebasa rake.
Mafuta epeturu kana mari yekufambisa inowirawo pasi peiyi sarudzo.
Kuregererwa kana zvekushandisa
Iyi mibairo miviri ndeiya inoitwa maererano nemari yemubhadharo kana nguva idzo mushandi aifanirwa kudya kunze kwebasa kana kuita mari mukati memubhadharo wake webasa.
ari muripo mabhenefiti Chii chinokuchengetedza munharaunda chinokupa iwe?
Izvi zvinoreva kune chero mhando yekutakura, kuendesa kana kumisa kune imwe mhando yekudzingwa
Muchiitiko chekuti paine kuremara kwenguva pfupi kana kushomeka kwemabasa kwenguva pfupi mune iyi sarudzo, mari yakabvumiranwa ichafanirwa kuuya.
Mari yekupedzisira isiri yemubhadharo haipinde mupiro yemagariro uye havaverenge pavanobvisa mutero wemunhu.
Kubviswa kwemitero yemunhu wega
Pasi pazasi, tinowana chikamu chemabvisirwo mune izvo zvinhu zviri kuzobviswa pamubhadharo wemwedzi wega wega. Mari idzi ndidzo dzinopihwa mutero wemari uye SS.
Mutero wemunhu wega wega wakasiyana kune wega wega wevashandi, saka isu tinofanirwa kuziva kuti ichi chiyero chinorevei uye kunyanya kwatingaiwana mukati meyedu yekubhadhara.
Mari iyi ndiyo ichafanirwa kuiswa pachirevo chemari. Kana isu tiine yakaderera kwazvo mari yemunhu mutero, chinhu chakajairika ndechekuti isu tinofanirwa kubhadhara zvakanyanya kuhomwe kana kudzoka kuri kukodzera. Nekudaro, kana yakakwira, chakajairika chinhu ndechekuti iwe unotipa isu kuti tidzorere.
Izvo zvikamu izvo SS zvinotigadzira
Zvakajairika zvinoitika. Izvi zvinoverengerwa ne4,7% yemari dzemubhadharo, zvisinei, nguva yekuwedzera haizotariswe pano.
Iyi sarudzo inoverengwa zvichienderana nechibvumirano icho munhu anacho. Panyaya yevashandi vane kondirakiti yakajairika, huwandu hunoverengerwa hunosvika 1,55%, zvisinei, kune vanhu vane yakazara-nguva kana yenguva-yechibvumirano, ichave 1,60%.
Kuwedzeredza kwesimba majeure
Kweawa yega yega yekuwedzera inoitwa, huwandu hwe2% hunofanira kubviswa. Yese nguva yekuwedzera ichave yakachengetwa yakaderera kuitira kana vanhu nekambani vakabvumirana, inogona kuwedzerwa paawa imwe chete.
Mamwe mabhadharo ane pfungwa pamberi kana chero imwe kubviswa.
Yese mvura yekugashirwa
Pano tichaona huwandu hwakazara hwatinofanirwa kugamuchira kubva kukambani nezvakawedzerwa uye zvakabviswa izvo poindi yega yega zvinotipa.
Izvi ndizvo zvatinodaidza Net mari, chii chasara mushure mekuita iyo kuderedzwa kubva pakubhadhara kwakakura.
Mari inoonekwa pano ndiyo yatichawana muakaundi yedu yekubhangi pakupera kwemwedzi.
Aya ndiwo matanho anofanirwa kuiswa mubhadharo uye aya ndiwo maitiro aunofanira kuverengera. Vazhinji vevanhu vanongoverenga sarudzo yezvese kuti vagamuchire, vasina kumbomira kuti vaongorore iyo yasara mari kuti vaone kana iri chaiyo mari yavari kushandisa pamubhadharo wako, iyo mari yaunofanira kugashira.
Iye zvino zvawava kuziva huwandu hwaunofanira kunyatso kuziva, tarisa muhoro wako uye uone kana mari yacho ichinyatsoenderana uye ivo vari kukubhadhara iwe chaunofanira kugashira zvichibva pane zvese zvakawedzerwa uye zvakabviswa zvaunazvo.
Hazvigoneki kuti huwandu hwacho huchasiyana kubva pamwedzi kusvika pamwedzi, saka unobhadharisa huwandu hwakaenzana mwedzi wega wega, zvisinei, zvingangoita kuti kana ikashanduka gore negore.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Basa » Maitiro ekuverenga mubhadharo uye uzive kuti zvakanaka
Kugadzikana kwepasirese kunogona kudzora hupfumi kudzoka?
Mari yekuvandudza mari kwazvo pamusika